Tari-dalana ho fianarana ny Boky farany ao amin’ ny Baiboly : APOKALIPSY | Madagascar features website
1 Korintiana 12:12-13
Sunday, July 15, 2012 - 07:45
Maro dia maro tokoa ny resaka miparitaka amin' ny boky, gazety, radio, internet,.. mikasika ny fivavahana.
Mila mitandrina tsara anefa raha mamaky azy ireny, indrindra raha miresaka momba ny Apokalipsy sy ny faminaniana momba ny zavatra ho avy; satria dia maro ireo literatiora no tsy azo antoka, ka mety hanimba izay finoana mba efa anananao.
Ity fampianarana atolotra eto ity dia nalaina avy amin' ny soratry ny Misionery mpampianatra Théologie amin' ny oniversité-n' ny Misiona any Stavanger (Norvège), ary heverinay ho adidy ny mizara izany eto, mba hampisehoana ny tena fampianarana marina, manoloana ny sandoka.
Raha misy zavatra tsy azonao dia aza misalasala manoratra ao amin'ny group facebook antsoina hoe "vavaka" fa misy manam-pahaizana manokana momba ny Soratra Masina afaka hamaly anao ao : http://www.facebook.com/groups/440889532610957/
Read more about Ilàna fitandremana
(tapany voalohany : Toko 1 - 11)
(tapany faharoa : Toko 12 - 22)
Ny boky Apokalipsy, - araka ny fitarihan-teny ao anatiny (Apokalipsy:1:1-2), - dia :
fanambaran’i Jesosy Kristy,
izay nomen’Andriamanitra Azy,
ka nampiandraiketina anjely anankiray ny fanehoana azy amin' i Jaona,
mba horaketina an-tsoratra, ka hovakintsika mpanompony.
Ny anarana hoe APOKALIPSY
Ny anaran’ny boky hoe “Apokalipsy” dia tsy avy amin’i Jaona Apostoly, fa anarana napetaka taty aoriana, ary nankinina amin’ny Apokalipsy:1:1 .
Izy io dia fanagasiana ny teny Grika hoe: "apokalypsis" izay midika hoe fanambaràna.
Miverina in-18 io teny io ao amin'ny Testamenta Vaovao;
ary ny verbe "apokalyptein" (= midika hoe "manambara" na "maneho zavatra izay niafina") dia hita in-26.
ohatra: Matio:11:25, Matio:11:27
Read more about Ny anarana hoe APOKALIPSY
no anarana nomena io Boky io, satria misy zavatra izay niafina (mystère), kanefa dia naseho ao.
Mahaliana tokoa ny hahalala izany zava-niafina izany, ary ny maha Andriamanitra mihitsy no manambara azy, dia tokony hamporisika antsika bebe kokoa mba hamaky ity Boky ity.
Manana endrika taratasy alefa ny Boky Apokalypsy. Misy
Jaona no nanoratra ny Boky "Fanambarana"
Ny mpandray ny fanambaran’i Jesosy Kristy, “ny mpanompony Jaona” (Apk:1:1), dia olona fantatra mazava tsara sady nanam-pahefana tamin’ireo izay nanoratana ny boky: “Jaona (manoratra) ho amin’ny Fiangonana fito any Asia” (Apk:1:4 ampitahao amin’ny fiverenan’ny anarany ao amin’ny Apk:1:9 sy Apk:22:8).
Jaona dia lehilahy nanana ny fahefana apostolika tamin’ireo fiangonana izay nanoratany ireo.
Ny fijery izay nahazo vahana be teo amin’ ny fiangonana tranainy dia nanondro an’i Jaona, zanak' i Zebedio, izay apostolin’i Jesosy niaraka tamin’i Jakoba rahalahiny, ho ny mpanoratra.
Justin Martyr († ca. 165) izay nipetraka tao Efesosy tamin’ny fotoana sasantsasany sady nahalala ny Fanambarana, dia manohana izany.
Tahaka izany koa ry Irené († ca. 200), Clément d’Alexandria († talohan’ny 215), Tertullian († taorian’ny 220) ary indrindra ny Gnostika Apokrifan’i Jaona (naka sy nanoratra ny Apk:1:19 ao amin’ny bokiny ary nilaza an’i Jaona, ilay rahalahin’i Jakoba, zanak' i Zebedio, ho ny mpanoratra ny Fanambarana).
Ireo tohan-kevitra ivelany dia manondro ny vanim-potoan’ny emperora Domitiana (81–96 AD) ho fotoana nanoratana ny boky. Ny tohan-kevitra anatiny ihany koa dia manohana izany daty izany.
Read more about Jaona no nanoratra ny Boky "Fanambarana"
Andefasana ny Boky "Fanambarana"
FANEHOANA NY ZAVATRA ANKEHITRINY: Ny Fiangonana fito
Ny Boky Apokalipsy manontolo dia nosoratana ho an’ny Fiangonana fito any Asia, araka ny voalaza ao amin’ny Apokalipsy:1:4 . (izy manontolo, fa tsy ny Toko faha-2 sy faha-3 ihany akory).
Ho an’ny Kristiana tao an-tananan’i
Efesosy, Smyrna, Pergamosy, Tyatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodikia.
Maneho ny voalaza ao amin’ny boky manontolo ho fisehoana ara-tantara voafaritra ara-jeografia mazava tsara tamin’ny fiafaran’ny taon-jato voalohany taorian’i Kristy izany.
Ireo Fiangonana fito ireo dia Fiangonana nisy tany Azia Minora tokoa, ary tandrify azy tsara ireo hafatra avy amin’i Jesosy ireo.
Ny isa fito koa anefa dia manambara fa ireo Epistily ireo dia maneho ny toetry ny Fiangonana kristiana rehetra, amin’ny fotoana rehetra.
Tsy dia hoe misokajy fito ny Fiangonana tsy akory, fa ireo toetra voalaza ireo dia mety ho hita mifangaroharo any amin’ny Fiangonana tsirairay.
Ireo epistily ireo dia fanehoan’i Jesosy ny toetry ny Fiangonana tsirairay ho fananarana, fampaherezana, fampiomanana azy ireo hanatrika ny fiaviany.
Read more about Andefasana ny Boky "Fanambarana"
fiarahabana eo am-piandohany (Apk:1:4-6)
ary misy firarian-tsoa amin'ny fiafarany (Apk:22:21).
Ny Boky Apokalipsy dia azo zaraina dimy toy izao :
Ny Apokalipsy:1:1-3 dia "Lohateny" izay nosoratan’i Jaona tenany
Ny Apokalipsy:1:4-8 kosa dia "Teny mialoha", ka mitsinjara toy izao:
Apokalipsy:1:4-6: Fiarahabana sy Fiderana an’i Jesosy Kristy
Apokalipsy:1:7-8: Filazana ny hihaviany ho hita maso, sy ny amin’Andriamanitra mandrakizay, Izay hanatanteraka ny
Read more about Fitarihan-teny Apokalipsy
Fiantsoana an’i Jaona haminany
Ny Apokalipsy:1:9-20 dia mitantara ilay fahitana fototra: Fiantsoana an’i Jaona haminany.
Apokalipsy:1:9-11: Ny zavatra nanodidina ny fandraisan’i Jaona ny fiantsoana
Apokalipsy:1:12-16: Ny Zanak’olona eo anivon’ny fanaovan-jiro fito
Apokalipsy:1:17-20: Ny vokatry ny fahitan’ i Jaona Apostoly
Read more about Fiantsoana an’i Jaona haminany
Fiantsoana an' i Jaona haminany (Apk:1:9-20)
Ny tenin’i Kristy ho an’ny Fiangonana fito (Apokalipsy:1:9 - 3:22)
Ho an’i Efesosy (Apk:2:1-7)
Ho an’i Smyrna (Apk:2:8-11)
Ho an’i Pergamosy (Apk:2:12-17)
Ho an’iTyatira (Apk:2:18-29)
Ho an’i Sardisy (Apk:3:1-6)
Ho an’i Filadelfia (Apk:3:7-13)
Ho an’i Laodikia (Apk:3:14-22)
Read more about Ny tenin’i Kristy ho an’ny Fiangonana fito (Apokalipsy:1:9 - 3:22)
Taratasy ho an' ny fiangonana fito tany Asia (Apokalipsy:2-3)
Ny fanambarana naseho tamin' i Jaona Apostoly (Apokalypsy:4 - 22)
Apokalipsy toko faha-4 hatramin' ny toko faha-22 : MOMBA NY ZAVATRA HO AVY, MIALOHA NY FIAVIAN’I JESOSY
Ny filazana hatreo amin’ny Apk:4:1 (“Rehefa afaka izany dia hitako fa...”)
ka hatramin’ny Apk:22:5 , dia saiky tsy voalahatra ara-potoana araka ny fisehoany.
Hitantsika ao ireo fitsarana telo izay misy fizarana fito avy:
Fitomboka fito (Apk:6:1– Apk:8:1),
Trompetra fito (Apk:8:2– Apk:11:19),
Lovia fito (Apk:15:1– Apk:16:21).
“Fito” no isa symbolika lehibe indrindra ao amin’ny Fanambarana (ary koa ireo hafatra fito: Apk:2:1 – Apk:3:22); milaza fahafenoana ny isa fito.
Efa mahatratra ny farany sahady ny fitsarana farany ao amin’ny famahana ny fitomboka fahenina (Apk:6:17),
mitovy amin’izany koa tamin’ny fanenon’ilay trompetra fahafito (Apk:11:18).
Ankoatr’izany, tamin’ny fanehoana ny lovia fito dia voalaza fa ‘mifarana’ miaraka amin’ireo loza fito ireo ‘ny fahatezeran’ Andriamanitra’ (Apk:15:1; ampitahao amin' ny Apk:16:17, maneho ny lovia fahafito).
Saiky mirazotra hatrany ny filaharan’ireo fizarana tsirairay miisa fito ireo.
Hitantsika anefa ny fihamafisan’ny fitsarana miandalana.
* Ao amin’ny ireo fitomboka dia misy fetrany ny fitsarana (Apk:6:5-6 : ny voa vokatry ny tany no nolevonina, fa tsy ny oliva sy ny voaloboka; Apk:6:7-8 : ny ampahefatry ny mponin’ny tany ihany no novonoina).
* Ao amin’ny trompetra kosa dia mitombo izany: ny iray ampahatelony no tsaraina.
* Farany, ao amin’ireo lovia dia tsy voafetra ny fitsarana entiny.
Voazara ho roa ny fanambarana satria ny Apk:11:15-19 - izay milaza ny trompetra fahafito - dia manoritsoritra ny fandresena farany ny ratsy.
Amin’ny toko faha-12 sy ny manaraka kosa anefa dia mifanena indray amin’ny fanjakany tena masiaka isika.
Noho izany, ny Apk:4:1– Apk:11:19 sy ny Apk:12:1 – Apk:22:5 dia toa tantara roa mirazotra ihany.
Read more about Ny fanambarana naseho tamin' i Jaona Apostoly (Apokalypsy:4 - 22)
Ny fanambarana nomena an'i Jaona (Apk:4:1-22:5)
Fanambarana mirazotra tapany 1 (Apk:4:1 - Apk:11:19)
* Ireo Fitomboka fito (Apk:6:1-17 - Apk:8:1), elanelanin’ny ‘interlude’ ao amin’ny toko faha-7, ary ireo Trompetra fito (Apk:8:2 – Apk:9:21 + Apk:11:15-19)
* Ny horonan-taratasy tsy voatomboka sy ireo vavolombelona roa (10:1–11:14)
Read more about Fanambarana mirazotra tapany 1 (Apk:4:1 - Apk:11:19)
Fanambarana tapany voalohany (Apk:4:1 - Apk:11:19)
Ny fahitana ny fonenana any an-danitra (4:1–5:14)
Ny Apokalipsy toko faha-4 sy faha-5 dia milaza ny zavatra any an-danitra.
Ny seza fiandrianan’Andriamanitra.
Ireo seza fiandrianana 24.
Ny fideran’ny zavamananaina.
Ny fiankohofan’ny loholona 24
Ilay boky misy tombokase fito.
Ny Lionan’i Joda, dia ny Zanak’ondry no afaka mamaha azy.
Fideran’ny zavamananaina sy ny loholona 24, mitondra lokanga sy ny ditin-kazo manitra = ny vavaky ny olona masina
Fideran’ny anjely sy ny zavaboahary rehetra ny Zanak’ondry
Naseho tamin’i Jaona ny tontolo miafina any an-danitra.
Novohana ny varavaran’ny lanitra ary nasaina nijery sy niditra tao mihitsy izy (Apk:4:1).
Ny feo tahaka izay efa henony tao amin'ny Apk:1:10 dia niteny taminy hoe “Miakara aty dia hasehoko anao izay zavatra tsy maintsy hiseho rahatrizay.
Tao an-danitra dia nomena an’i Jaona araka ny fomba fijery avy any an-danitra na araka ny fahitana avy any ambony ny fomba fahitana izao tontolo izao.
Noho izany, ao amin’ny fanambarany dia mifandray amin’ny mpihaino azy tao amin’ny fiangonana tsy voafetra – soloan’ireo fiangonana fito any Asia – amin’ny fomba fijery samihafa sy mitatra momba izao tontolo izao sy ny tantara izy.
Ny fomba fijery avy any an-danitra sy avy amin’ny fiafaran’ny tantara dia tena endrika manokan’ny soratra apokalyptika.
Mbola hiverenantsika amin’ny manaraka amin’ireo foto-kevitry ny toko 4 sy 5 izay hanoritsoritantsika ny sary hanehoana an’Andriamanitra sy Kristy izany (ampit. II.10 sy 11).
Amin’izao aloha dia ho ferantsika amin’ny ireo horonan-taratasy voatomboka teo an-tanan’Andriamanitra ny famotopotorana (Apk:5:1).
Mila vohana ny horonan-taratasy kanefa ny olana dia ny ahitana izay mendrika hanao izany.
Farany, ny Zanak’ondry, Kristy, no voatondro fa tandrify hanao izany (5:5).
Inona no foto-kevitry ny horonan-taratasy?
Tsy azo lazaina hoe ireo trangan-javatra izay miaraka na manaraka ny famahana ireo fitomboka ao amin’ny toko faha 6 izany. Mbola hiverenantsika ny famaliana izany fanontaniana izany aoriana (ampit. II.5).
Read more about Ny fahitana ny fonenana any an-danitra (4:1–5:14)
Ny fahitana ny fonenam-boninahitra any an-danitra: Andriamanitra, ny Zanak’ondry, ary ireo horonan-taratasy voatomboka (Apk:4:1 - Apk:5:14)
Ny famahan’ny Zanak’ondry ireo fitomboka fito (Apokalypsy:6:1 - 8:1)
Ny Apokalipsy:6:1-17 dia mitantara ny namahan’ny Zanak’ondry ny tombokase enina:
Izy no manana ny zavatra rehetra eo am-pelatanany, na dia vokatry ny fahotan’ny olombelona avokoa aza ireo loza rehetra ireo. Misy koa anefa ny korontana eo amin’ny tany sy ny lanitra, noho izy tsy natao haharitra (Hebreo:12:27)
Apk:6:1-2: Vohana ny tombokase voalohany: ny soavaly fotsy: Ny fitoriana ny Filazantsara.
Mpitaingin-tsoavaly fotsy, miaraka amin’ny satro-boninahitra, nahomby tamin’ny fandresena.
Ny fotsy dia manambara indrindra ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fandreseny.
Apk:6:3-4: Vohana ny tombokase faharoa: ny soavaly mena dia midika hoe “ady” : ny adim-pirenena.
Mpitaingin-tsoavaly mena, miaraka amin’ny sabatra, nakana ny fandriam-pahalemana tamin’ny tany
Apk:6:5-6: Vohana ny tombokase fahatelo: mpitaingin-tsoavaly mainty, miaraka amin’ny mizana teny an-tanany, nitondra mosary.
Manaraka ny adim-pirenena ny mosary sy halafosam-piainana. Mitosaka anefa ny entana “de luxe”.
Apk:6:7-8: Vohana ny tombokase fahefatra: ny soavaly hatsatra: Ny areti-mandringana. Vokatry ny ady sy ny hanoanana koa.
Ny mpitaingin-tsoavaly fotsy hatsatra dia ny Fahafatesana, nitondra fahafatesana ho an’ny ¼ ny tany.
Ireo loza ambaran’ny tombokase telo farany dia vokatry ny fahotan’ny olona ihany. Ny fitoriana ny filazantsara anefa dia tsy maintsy handroso.
Apk:6:9-11: Vohana ny tombokase fahadimy: Fanenjehana noho ny tenin’Andriamanitra sy ny fanambarana an’i Jesosy.
Ny fanahin’ireo maritiora teo ambany alitara mitady fanafahana;
Ny fanahin’ny olona masina martiora dia mitaky valiny avy amin’Andriamanitra na dia tsy nitaky izany aza izy ireo tamin’ny namonoana azy (Asa:7:60)
Nasaina niandry amim-pahatoniana aloha izy ireo mandra-pahafenon’ny isany.
Apk:6:12-17: Vohana ny tombokase fahenina: Fikorontanana ara-kosmika, tahotra nahazo ny olona noho ny fiavian’ny andron’ny fahatezerana, kotrokorana, korontana fahaverezan-kevitra eo amin’ny tsy mino: Valin’ny fitarainan’ny ran’ny olona masina.
Toy ny efa ho tonga ny farany, nefa tsy mbola izany. Ireny loza rehetra ireny manko dia mikendry fibebahana. (Apokalipsy:9:20-21).
Apk:7:1-17: Interlude: Mbola tsy sokafana ny tombokase faha-7 fa mbola fanehoana indray ny zavatra any an-danitra.
1) Apk:1-8: Ny mpanompon’Andriamanitra nasiana marika ny tombokase teo amin’ny handriny.
Tsy mbola avela hihazona ny rivotra efatra amin’ny tany ny anjely efatra fa mbola asiana tombokase ny mpanompon’ Andriamanitra (= ny Mino). Jereo Matio:24:14.
(Ny teny hoe “efatra” dia milaza ny herin’ny zava-boahary)
2) Apk:9-17: Ireo an’alinaliny tany an-danitra
Fanehoana ny fahatanterahana amin’ny farany sahady: Ireo voaisy tombokase, na ny voavonjy:
- Avy amin’ny Israely: 12 000 x 12 = 144 000.
- Avy amin’ny Jentilisa: Tsy tambo isaina
Tsy horasina ara-bakiteny ny isa 144 000 , sahala amin’ny ataon’ny sekta, fa manambara ny voavonjy amin’ny Israely, ka isan’ny Fiangonana kristiana: Ny isa 12 dia manambara ny foko 12, ary koa ny Fiangonana kristiana.
Fiderana an’Andriamanitra sy ny Zanak’ondry
(Ny tombokase eo amin’ny handrin’ny mpanompon’ Andriamanitra dia mariky ny batisa sy ny finoana velona)
Apk:8:1: Tombokase fahafito: Fahanginana nandritry ny antsasak’adiny tany an-danitra
Eto vao nosokafana ny tombokase faha-7, izay manokatra trompetra fito koa. Tsy ny Zanak’ondry no hitsoka ireo trompetra fito ireo fa anjely.
Read more about Ny famahan’ny Zanak’ondry ireo fitomboka fito (Apokalypsy:6:1 - 8:1)
Ny famahan’ny Zanak’ondry ireo tombokase fito (Apk:6:1-Apk:8:1)
Ireo trompetra fito (Apokalypsy:8:2-11:19)
Apk:8:2 : Nomena trompetra tsirairay avy ireo anjely izay nitsangana nanoloana an’Andriamanitra
Apk:8:3-5 : Interlude: Ditin-kazo manitra sy ny vavaky ny olona masina; Afo nalatsaka tamin’ny tany, varatra sy horohoron-tany.
Alohan’ny hitsofana ny trompetra voalohany anefa dia misy anjely manatitra ny vavaky ny olona masina hampiarahina amin’ny ditin-kazo manitra, mba hodorana eo amin’ny alitara.
Tsy maintsy diovina ny vavaky ny olona masina vao eken’Andriamanitra. (Ny vavaka amin’ny anaran’i Jesosy)
Valim-bavaky ny olona masina: kotrokorana, tselatra, horohorontany (Apk:8:5). Jereo ihany koa ny Apokalipsy:9:20-21.
Apk:8:6 : Ireo anjely vonona hitsoka ny trompetra. Ny trompetra efatra voalohany: Lozan-javaboahary mamely ny tontolo iainana.
Apk:8:7 : Trompetra voalohany: Havandra sy afo; 1/3 n’ny tany, ny hazony sy ny ahi-maitsony dia nodorana.
Apk:8:8-9 : Trompetra faharoa: Natsipy any an-dranomasina ny tendrombohitra nirehitra; ny 1/3n’ny ranomasina sy ny zavamanan’ aina tao ary ny sambony dia nolevonina
Apk:8:10-11 : Trompetra fahatelo: Ilay kintana fanilo nanapoizina ny 1/3 n’ny renirano sy ny loharano
Apk:8:12 : Trompetra fahefatra: Nahena ny 1/3n’ny herin’ny tara-masoandro, ny volana ary ny kintana
Apk:8:13 : Voromahery iray miantso loza ho an’ny olombelona izay ho tratry ny loza ambaran’iny trompetra manaraka. Ny trompetra faha-5 sy faha-6, loza mamely mivantana ny olombelona
Apk:9:1-12 : Trompetra fahadimy ; ny loza voalohany: Valala avy amin’ny hantsana, miaraka amin’ny fisehoan’ny soavaly mirongo fiadiana, teo ambany fitarihan’ny ‘mpandrava’, izay nampahory ny olona nandritry ny 5 volana.
Apk:9:13-21 : Trompetra fahenina: anjely efatra niaraka tamin’ireo maherin’i Kalvary; 1/3n’ny olona no novonoina, kanefa na dia izany aza dia mbola nanohy ny fanompoan-tsampiny sy ny fiainam-pahotany ihany ireo sisa velona.
Mariho ny Apokalipsy:9:20-21: Hay ny anton’ny amelana ireny loza rehetra ireny hitranga dia ny mba hibebahan’ny olona, - kanefa tsy nibebaka izy.
Jereo koa ny Isaia:9:11 , Isaia:9:16 , Isaia:9:20; Isaia:10:4.
Izay hampibebaka azy dia ny Tenin’Andriamanitra: Apokalipsy:10:11
Apk:10:1 - Apk:11:14 : Interlude: Tsy mbola notsofina ihany ny trompetra faha-7 eto, fa misy fiatoana
1) Apk:10:1-11 : Ny anjely niaraka tamin’ny horonan-taratasy kely, nohavaozina ny fanompoan-paminanian’i Jaona.
Misy anjely mahery iray manambara amin’i Jaona fa efa tapitra ny fetr’andro (Apokalipsy:10:1-7) ka ny trompetra faha-7 dia hanambara ny farany.
Avy eo dia misy boky kely omena an’i Jaona (Apokalipsy:10:8-11), izay manambara fa alohan’ny trompetra faha-7 dia hisy fifohazana izay hanadio ny Fiangonana ka hahatonga azy hahajoro ao anatin’ny fahoriana lehibe farany (Toko 11).
2) Apk:11:1-14 : Ny fanadiovana ny Fiangonana (fandrefesana ny tempoly sy ny amin’ireo vavolombelona ara-paminaniana roa). Toy izao ny an-tsipiriany :
* Apk:11:1-2 Ny fandrefesana ny tempoly
Ny fandrefesana ny tempoly (Apk:11:1) dia midika hoe famaritana ny toerana masina izay harovan’Andriamanitra, fa ny ivelan’izany izay tsy horefesina dia havela hohitsakitsahan’ny Jentilisa (tsy ho ao ambany fiarovan’Andriamanitra).
Ny toerana voarefy dia milaza ny Fiangonana marina, izay manana firaisana velona amin’i Jesosy, fa ny ivelany dia ny kristiana anarany ihany.
Ireo kristiana ”ivelany fotsiny” ireo anefa dia miaraka amin’ny Fiangonana marina ihany, fa ny Fiangonana marina no ho voatahiry (Apokalipsy:11:2 b).
* Apk:11:3-6: Ny momba ireo vavolombelona roa mitory fibebahana.
Ny isa roa dia enti-manambara fa mafy orina ny teny vavolombelona entiny (Deoteronomia:19:15; Jaona:8:17).
Miseho amin-kery toa an’i Elia, Jaona mpanao batisa
* Apk:11:7-12 ny fahafatesan’ireo vavolombelona roa
Taorian’ny fahavitany ny asam-panompoany dia novonoin’ny bibidia avy tamin’ny hantsana ireo vavolombelona roa, kanefa novelomina indray afaka 3 andro sy tapany ary nakarina ho any an-danitra.
Apokalipsy:11:13 Ny vokatry ny fahafatesany:
Nomontsanin’ny horohoron-tany ny tanàna, Olona 7000 no novonoina, ary fibebahan’ny olona sisa (olona vitsy ihany anefa, fa ny ankamaroan’ny olona tsy nibebaka: Apk:9:20-21; Apk:16:9 , Apk:16:21)
Ny asany dia haharitra 1260 andro = 42 volana = 3 taona sy ½ Tsy ara-bakiteny izany, fa midika fotsiny hoe fotoana voafetra.
Rehefa vita izany asany izany dia hiady amin’ny bibidia (ny antikristy, izay holazaina ao amin’ny Toko-13 sy Toko-17, ary efa voalaza any amin’ny bokin’i Daniela koa.
Efa teo ihany ny bibidia tamin’ny fotoana niasan’ireo vavolombelona roa, nefa nahery ny fijoroan’ireo vavolombelona roa ireo (Apokalipsy:11:5) ka rehefa maty ireo vao tena niseho izy.
* Apk:11:14 Ny loza faha-2 dia nanomboka tamin’ny trompetra faha-6 (Apokalipsy:9:13), fa ny loza faha-3 dia manomboka amin’ny trompetra faha-7, izay hanambara ny fisehoan’ny biby dia izay efa voalaza tarý amin’ny Apokalipsy:11:7, fa ny Apokalipsy: 11:15-19 dia mamintina izay ho voalazan’ny trompetra faha-7 (Apokalipsy:12-22) ny adin’ny Fiangonana amin’ny dragona sy ny bibidia, ary ny fandresen’i Jesosy Kristy sy ny fiderana noho izany fandreseny izany.
NY TROMPETRA FAHA-7: Toko 11.15 – Toko 22.5 izy manontolo
* Apokalipsy:11:15-19: Filazana mialoha ny votoatin’ny fanambaran’ny trompetra faha-7
Ireto andininy ireto (Apk:11:15-19) àry dia maneho sahady ny fiderana any an-danitra noho ny fandresena farany,
ary mamintina ny ho voalazan’ny trompetra faha-7 (Toko12-Toko22),
dia ny fandresen’ny fanjakan’Andriamanitra, sy ny fideran’ny loholona any an-danitra.
Mariho ny Apokalipsy:11:15: ny fanjakana dia lasan’ny Tompontsika sy ny Kristiny. Resin’Andriamanitra ny fanjakan’izao tontolo izao. Novohana ny tempolin’Andriamanitra any an-danitra mba hahitana ny fiaran’ny fanekena.
Ny Toko12-Toko19 dia maneho ny nahazoana ny fandresena, fa ao amin’ny Toko20-Toko22 kosa no tena mivelatra izany fandresena izany.
Read more about Ireo trompetra fito (Apokalypsy:8:2-11:19)
Ireo trompetra fito (Apk:8:2 - Apk:11:19)
Fanambarana mirazotra tapany 2 (Apk:12:1 - Apk:22:5 )
Read more about Fanambarana mirazotra tapany 2 (Apk:12:1 - Apk:22:5 )
Fanambarana tapany faharoa (Apk:12:1 - Apk:22:5)
Ny vehivavy sy ny dragona - ny adin’ny bibidia tamin’ny olona masina (12:1-14:20)
12:1-18: Niteraka ny zanany lahy izay novonjena teo am-bavan’ilay bibidia ary nakarin’Andriamanitra any an-danitra ilay vehivavy.
Nomena toeram-pialokalofana tany an’efitra ilay vehivavy. Ny dragona - ny devoly - dia natsipy tety an-tany taorian’ny fahareseny an’ady. Nanenjika ilay vehivavy, izay afaka nandositra izy kanefa mbola nanohy ny adiny tamin’ny taranak’ilay vehivavy ihany.
13:1-18: Ny dragona sy ireo bibidia roa:
1) vv. 1-10: Ny bibidia niakatra avy tamin’ny ranomasina: Niteny ratsy nanohitra an’Andriamanitra izy, niantso ady tamin’ny olona masina. Niankohofan’ny mponin’ny tany izy.
2) vv. 11-18: Ny bibidia izay nipoitra avy tamin’ny tany: namitaka ny mponin’ny tany hivavaka tamin’ilay bibidia voalohany izy ary nitaona azy ireo mba handray ny marika teo amin’ny Tanana na teo amin’ny handriny. Ny mariky ny bibidia dia ny 666.
14:1-5: Interlude: Ny Zanak’Ondry sy ireo 144 000
14:6-13: Ny hafatr’ireo anjely telo:
1) vv. 6-7: Filazantsara mandrakizay ho an’ireo izay naharitra nivavaka tamin’Andriamanitra irery ihany, ho avy ny fotoan’ny fitsarana.
2) v. 8: Lavo Babylona
3) vv. 9-11: Fananarana tsy hivavaka amin’ny bibidia sy tsy handray ny mariny.
4) vv. 12-13: Antsoina haharitra ireo masina, hotahiana ireo maty tao amin’ny Tompo.
14:14-20: Fotoam-pijinjana: nanangona ny vokatry ny tany ny Zanak’olona sy ireo anjely maromaro ary nanipy izany tao amin’ny famiazam-boloboky ny fahatezeran’Andriamanitra.
Read more about Ny vehivavy sy ny dragona - ny adin’ny bibidia tamin’ny olona masina (12:1-14:20)
Ny vehivavy sy ny dragona - ny adin’ny bibidia tamin’ny olona masina (Apk:12:1 - Apk:14:20)
Ireo lovia fito (15:1-16:21)
15:1 Ny fahitana ireo anjely fito niaraka tamin’ny loza teny an-tanany tsirairay avy
15:2-4: Interlude: Ny hiran’i Mosesy sy ny Zanak’ondry
15:5-16:1: Ny anjely nandray ny lovia feno ny fahatezeran’Andriamanitra ary nasaina nandrotsaka izany tamin’ny tany.
16:2: Ny lovia voalohany: Vay ratsy nampahory tamin’ireo izay nanana ny mariky ny bibidia sy
nivavaka tamin’ny sarin’ny bibidia.
16:3: Lovia faharoa: Nivadika ho rà ny ranomasina, maty daholo ireo karazan-javamanan’aina tao amin’ny ranomasina.
16:4-7: Lovia fahatelo: Nivadika ho rà ny renirano sy ny loharano. Rariny ny fitsaran’Andriamanitra
16:8-9: Lovia fahefatra: namely ny olona tamim-pahasiahana ny taratry ny masoandro, kanefa mbola nanohy niteny ratsy anaran’Andriamanitra ihany izy ireo.
16:10-11: Lovia fahadimy: Nohamaizinina ny fanjkan’ny bibidia. Manohy miteny ratsy an’Andriamanitra ihany ny olona.
16:12-16: Lovia fahenina: Namory ny mpanjakn’izao tontolo izao mba hiatrika ny ady farany ao
Harmagedona ireo fanahy ratsy.
16:17-21: Ny lovia fahafito: Horohoron-tany lehibe sy mahery setra namely an’i ‘Babylona’ sy ny Tanana hafa, nosy ary tendrombohitra maro no levona.
Read more about Ireo lovia fito (15:1-16:21)
Ireo lovia fito (Apk:15:1 - Apk:16:21)
Ny fitsarana an’i babylona, ilay vehivavy janga lehibe (17:1-19:10)
17:1-18: Ilay vehivavy janga lehibe, fanazavana ny sary
18:1-24: Ny fahalavoan’i Babylona
19:1-10: Ny hiram-pandresena sy ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry
Read more about Ny fitsarana an’i babylona, ilay vehivavy janga lehibe (17:1-19:10)
Ny fitsarana an’i babylona, ilay vehivavy janga lehibe (Apk:17:1 - Apk:19:10)
Ny fandresen’i Kristy sy ny fiafaran’ny tantara (19:11-22:5)
19:11-21: Kristy dia mpandresy, mitaingina soavaly fotsy, natsipy any amin’ny farihy mirehitra afo ireo bibidia sy ny mpaminany sandony, nohanin’ny voromanidina ireo faty niampatra.
20:1-6: Ny dragona - satana - nafatotra tao amin’ny hantsana lalina nandritry ny arivo taona, nanjaka niaraka tamin’i Kristy ireo martiora.
20:7-10: Ny famaliana mahatsiravina faran’ny Satan miaraka amin’ny miaramilany lehibe, izay
nolevonin’ny afo; natsipy any amin’ny farihy afo satana.
20:11-15: Ny fitsarana
21:1-8: Ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, Jerosalema vaovao nampidinina avy tany an-danitra.
21:9-22:5: Fanoritsoritana an’i Jerosalema vaovao sy ny fiainana eo amin’Andriamanitra sy ny Zanak’ondry.
Read more about Ny fandresen’i Kristy sy ny fiafaran’ny tantara (19:11-22:5)
Ny fandresen’i Kristy sy ny fiafaran’ny tantara (Apk:19:11 - Apk:22:5)
5. Teny farany (Apk:22:6-21)
Ireo Boky apokaliptika ao amin' ny Baiboly
Ao amin’ny Bokin’Isaia ohatra dia matetika antsoina hoe Apokalypsisy Isaiana ny toko 24–27.
Ny bokin’i Zakaria dia voamarik’izany toetra apokalyptika izany manokana: ireo fahitana mifampitohy ao amin’ny Zakaria:1:8 –6:8, izay ahitana ny mpaminany Zakaria miaraka amin’ny anjely izay manazava ny hevitr’ireo fahitana ireo aminy, ary koa ny fizarana faharoan’ny boky dia ny toko 9–14 izany.
Ny soratra apokalyptika tena mivelatra ao amin’ny TT anefa dia ny fizarana faharoa amin’ny bokin’i Daniela, i.e., Dan 7–12
Read more about Ireo Boky apokaliptika ao amin' ny Baiboly
: Boky mirakitra faminaniana ny Apokalipsy (Apokalipsy:22:6–7, Apokalipsy:1:3, Apokalipsy:22:18–19)
Ary ny ivon’ny Boky manontolo dia ny Zanak’ondry.
Izy no Tompo sy Mpandresy (Apokalipsy:1:7-8).
Toko 2-3: Fanehoana ny zavatra ankehitriny, - dia ny toetry ny Fiangonana izany
Toko 4–22: Fanehoana ny zavatra ho avy, - dia ny zavatra mialoha ny fiavian’i Jesosy izany.
tohiny (tapany faharoa) .....